Ny vokatra Amazon tsara indrindra dia any Canopy | Vaovao IPhone
Kanopy: ireo vokatra tsara indrindra an'i Amazon, napetraka tamin'ny tanana
Luis del Barco | | Fampiharana iPhone
Ankehitriny tadiavo fampiharana izay manampy lanja raha ampitahaina amin'ny olon-kafa mitovy amin'ny hitantsika ao amin'ny App Store dia mety ho asa sarotra tokoa. Na izany aza, ary soa ihany fa mbola misy ny fampiharana manaitra antsika amin'ny fomba tena mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fanolorana zavatra izay tena ilaina amin'ny andro anio.
Ity no tranga misy an'i Canopy, fampiharana iray izay misy ihany koa web version (Sa ny nifanohitra tamin'izay?) Amin'izay azontsika atao mahita ny vokatra Amazon napetraka nataon'ny ekipa sehatra. Noho io dia afaka miditra amin'ireo vokatra tsara indrindra azo jerena ao amin'ny magazay an-tserasera ankafizinay indrindra izahay amin'ny fividianana karazana isan-karazany.
Tsotra be ny fiasa ao aminy: ho ampy ny fisoratana anarana amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny dingana roa ahafahana miditra amin'ny asany rehetra ary manomboka mankafy Canopy. Ho fanampin'ny fitadiavana sokajy samihafa sy ireo faritra voafantina hahitana mora kokoa ny zavatra tadiavintsika, dia afaka mahita fizarana ihany koa isika miaraka amin'ny vokatra naoty nomen'ny mpampiasa indrindra. Mahazo a Feedback ny vokatra efa voafantina teo aloha. Inona no mety tsy mandeha?
Ny ampahany kely tsara indrindra amin'ity rindranasa ity dia ny misy azy io ho an'i Etazonia amin'izao fotoana izao. Izany hoe, ny vokatra miseho amintsika dia voafantina ao amin'ny magazay Amazon ao amin'io faritany io, ka ny sasany amin'ireo zavatra miseho amintsika mety tsy misy halefa any amin'ny firenentsika. Raha te hahalala raha misy izany na tsia, dia ho ampy ny miditra amin'ny rohy amin'ny vokatra voafantina ary manova ny toerana misy ny firenentsika. Na izany na tsy izany, ary raisina an-tsaina izany dia iray amin'ireo rindranasa tsy maintsy omentsika vahana, indrindra raha mpividy an'ity sehatra ity matetika isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Kanopy: ireo vokatra tsara indrindra an'i Amazon, napetraka tamin'ny tanana
Apple namindra ny orinasany iTunes avy any Luxembourg mankany Irlandy
Mihodina ho 7 ny iPad, averintsika jerena ny tantaran'ny takelaka Apple